Qaraxyada oo Halis ku Haya Wariyeyaasha Soomaaliya
Arbacadii, 25kii bishan, qaraxyadii ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa mar kale muujiyay sababta caasimadda Soomaaliya loogu darro liiska magaalada ugu halista badan ee ay wariyeyaasha ku shaqeeyaan dunida.
Wariyeyaal ayaa si deg deg ah ku tagay Hotelka Dayax ka dib markii ay weerar ku qaadeen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabab, oo ugu horeyntii gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay la beegsaday albaabka hore ee hotelka, ka dibna rag hubeysan.
Guud ahaan wajiga dhismaha hotelka oo shan dabaq ka koobnaa ayaa burburay, meydadna waxey daadsanaayeen hareeraha hotelka, wariyeyaasha ayaa wareysiyo ka qaadayay shaqaalaha gurmadka iyo dadkii weerarka ka badbaaday ama ka ag dhawaa goobta, markii qarax labaad oo ahaa gaari uu qarxa, 15 daqiiqo ka dib kii hore.
Qaraxaa dambe todoba ka mid ah wariyeyssha Somaaliyeed ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen, oo uu ugu daraa, sawir qaade la shaqeeynayay wakaaladda wararka ee AFP, Maxamed Cabdiwahaab.
Mohamed Abdiwahab sawir qaade AFP
Wariyeyaasha kale ee dhaawacmay waxaa ka mid ahaa: Sawir Qaade la shaqeeya wakaaladda wararka ee AP, Faarah Abdi Warsame, Yuusuf Jabuuti oo la shaqeeya Telefishinka Al-Jazeera, Abdulqaadir Maxamed Ga’al oo la shaqeeya Telefishinka Horncable iyo Maxamed Cabdikariim Gureey oo la shaqeeynayay shirkadda maxali ah oo dhinaca soo saarista filimada ka shaqeeysa.
Dhaawacyo inay ka soo gaaraan qaraxyada ama ay halis ku galaan marka ay socdaan weerarada iyo qaraxyada Muqdisho ee ay Al-shabab geysato waa wax ay mar walba la kulmaan wariyeyaasha Muqdishu ka shaqeeya.
Al-shaba oo isku dayeysa inay inay afgabiso dowladda Federalka ee Soomaaliya, ayaa si joog ah u weerarta hotelada magaalada, oo ah meelo ay isugu yimaadaan badankoodna ay degenyihiin saraakiisha dowladda, xildhibaanada iyo ganacsatada ku xirran dowladda.
Badankood wariyeyaasha waa kuwo u shaqeysta si madax banaan, ma helaan cid sugta amaankooda ama ka wacyigelisa halista, mana helaan damaanad qaad caafimaad hadii ay ku dhaawacmaan shaqadooda.
Feisal Omar, sawir qaade
Feysal Axmed Cumar, waa sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters, waxa uu ka waramayaa halista ay wariyeyaashu ku shaqeeyaan.
"Markii ay wax dhacaan, sawirqaadayaasha madaxa banaan ayaa ugu horeeya dadka goobta taga, iyagoo sida kaamaradahooda. Goobta ay tagayaanna waa goob cadow, Qaraxyo ayaa na beegsan kara, israsaaseynta ayaa wax nagu gaari karaan, xitaa waxaa dhici karta in ciidamada dowladda ay noo xiraan sawirada aan qaadanay awgood,” ayuu yiri Feysal. Waxa uu intaasi ku daray “waxaan u shaqeynaa sida askar aan hub wadan oo kale.”
Sanadkii 2011dii, Feysal waxa uu ka mid aha sadex Sawir Qaade oo wakaalada wararka Ruerters la shaqeeya, oo ku guuleystay abaal marinta tartanka 54aad ee sanadlaha ah ee World Press Photo ee dhinaca sawirada. Waxaa tartankaasi soo jiitay sawir uu ka qaaday wiil Soomaaliyee oo kaluun uu soo dabtay oo weyn dhabarka ku sita oo ku sii jeeda suuqa malaayga ee Xamar weyne.
Laba sano ka dib, bishii Novembar sanadkii 2013kii waa uu ku dhaawacmay Qarax ka dhacay Hotelka saxafi.
Dil Toogasho oo aan Waqtiyeysneyn
Lix la mid ah wariyeyaasha dhaawacmay Arbacadii waxey heshiis madax banaan kula shaqeeyaan qaar ka mid ah wakaaladaha wararka iyo telefishinada ugu waaweyn dunida, sida: AFP, AP, Al-Arabia iyo Al Jazeera.
Waxaa ka mid ahaa Faarax Cabdi Warsame oo ah sawir qaade la shaqeeya wakaaladda wararka ee AP. Farax waxa uu kaalinta 2aad ku qaatay abaal marinta caalamiga ah ee tartanka sanadlaha ee sawirada ee World Press Photo sanadkii 2010kii.
Sawirkiisa oo ahaa wiil dhalinyara ah oo ay Al-shabab ku dileyso dhagax meel fagaar ah.
Faarax oo 54 sana jir ah, ahna aabe leh sadex caruur ah ayaa sheegay in isaga iyo saaxibadii ay ku jiraan heegan 24ka saac, iyagoo diyaar u ah ka soo tebinta meel kasta oo Muqdisho ka mid ah oo ay wax ka dhacaan, laakiin marar badan waxaa dhacda in iyagaba ay ka mid noqdaan canaawiinta wararka ay soo tabiyaan, sidii dhacday Arbacadii la soo dhaafay, ee 25kii bishan Janaayo.
Farah Abdi, Sawir qaade AP
Waxey u aheyd Faarax markii labaad oo uu qarax ku dhaawacmo isagoo howshiisa shaqo ku jira. Bishii July sanadkii 2016kii, Faarax wuxuu sidoo kale ka mid ah ahaa dhowr wariye oo ku dhaawacmay Qarax Muqdisho ka dhacay. Waxa uu ku shaqeynta Muqdisho ku tilmaamay sidii, “Ku shaqeynta xaalad aad ku xukumantay dil toogasho ah oo aan waqtiyeysneyn.”
Faarax wuu ogyahay halista ka horeysa subax walba marka uu gurigiisa ka baxayo, laakiin waxa uu ii sheegay inuu shaqadaasa u gutto sadex sababood oo naf hurnimada u horseeday.
"Anigoo og halista iga horeeysa, ayaa waxaa I dhiirigeliya xaqiiqda ah inaan jecelahay shaqadeyda, iyo inaan dunida u sheego labadaba wanaagga iyo xumaanta laga geysanayo dalkeeyga . Waana sababta ugu weyn ee aan ugu ordo meel kasta oo ay wax ka dhacaan, midda labaad waa inaan awoodda inaan gutto waajibka aabanimo oo aan caruurteyda biilan karaa.”
Weerarkii Arbacadii waxaa ku dhaawacmay, Cabdulqaadir Abdulkadir Zubeyr, oo ah sawri qaade la shaqeeya Telefishinka Al-Carabiya. Bishii December sanadkii 2009kii, ayaa walaalkii ka weyn Xassan Zubeyr Xaaji Xassan (Fantastic) waxa uu ku dhintay Qaraxii Hotelka Shaamiw ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen wariyeyaasha, ardayda, waalidiinta iyo wasiiraddii ugu badnaa ee mar qura dowladda Soomaaliya uga dhinta Qarax.
Sida looga Manaafacaadsado Wariyeyaasha
Sida ay sheegtay hey’adda fadhigeeduyahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee u doodda Xuquuqda Wariyeyaasha, ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan, CPJ, Somalia waxaa lagu dilay 62 wariye tan iyo sanadkii 1991kii.
Wariyeyaasha in badan oo ka mid ah waxaa toogtay rag ka tirsan Al-Shabab, qaar cidii dishay ilaa iyo hadda lama yaqaan, kuwo aan badneyn waxey ku baxeen gacanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwii hogaamiye kooxeedyadii beri muqdisho ka talinayay, kuwo kale ayaa Iyana ku dhintay qaraxyo ay Al-Shabab sheegatay oo baabuurtoda loogu xiray , iyo kuw ka dhacay maqaayado iyo hotello Muqdisho ku yaala.
Maxamed Ibrahim Macalimuu, oo ah Xoghayaha Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyee ee Nosuj, horeyna ula soo shaqeeyay, idaacadda BBC laanteeda Afka Soomaaliga, Qeybta BBCda ee Africa la hadasha iyo wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa sheegay in in ka badan 100 wariye oo si madax banaan u shaqeysta Soomaaliya ay maalin walba halis u geliyaan noloshooda iyagoo sheeko raadinaya.
"Dal 70 % ay dadkiisuyihiin dhalinyaro ay da’adoodu ka hooseyso 30 sana jir, shaqa la’aantuna ay 75 boqolkiiba tahay, natiijadu waxey noqoneysaa in dhalin yaro badan oo aan laheyn qibrad ku fillan ay si madax banaan ugu biiraan sawir qaadayaasha madaxa banaan oo ay noloshooda halis u geliyaan”
Macalimuu waxa uu sheegay in shirkadaha wararka ka shaqeysta iyo idaacadaha ay ka faa’idaan shaqada wariyeyaasha tusaale ahaan – waxaa laga yaabaa buu yiri in sawir qiimihiisu suuqada caalam kale ka jooga inta u dhaxeysa 100-ilaa iyo 2050 in sawir qaadaha Soomaaliyee laga siiyo wax ka yar $50 dollar, iyadoo aan loo qiimeyn, tayada sawirka, warka uu xambaarsanyahay iyo halista ay u galeen soo qaadistooda.
Waxa uu yiri, "ma helaan tababarro shaqo, tusaalooyin dhinaca badbaadada ah, qalabka goobaha colaadaha laga gaashaanto qaraxyada iyo ceymis dhinaca caafimaadka iyo nolshaba ah. Kuwaas oo dhamaan ay helaan wariyeyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha ee dunida.”
Waxa uu sheegay inay yihiin shaqaale jaban oo goob colaad ah naftooda halis ku geliya, hadana aan helin faa’ido u dhiganta waxa ay shaqeystaan.
Waxa uu sheegay inaysan xitaa qaarkood helin ixtiraam ay ku muteystaan halista ay ku jiraan iyo shaqadooda.
"Wax xushmad ah oo dhinaca wada shaqeynta ah kalama kulmaan kuwa tifaftirayaasha u ah ee wakaaladaha ay la shaqeeyaan oo laga yaabo inay fadhiyaan xafiis qurux badan oo nabdoon oo Nairobi ku yaala. Qibrad la’aan, lacag la’aan iyo xushmad la’aan oo isbiirasadaa waxey halis weyn gelinayaan nolosha wariyeyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha.”
Cabdulaahi Colaad Rooble, oo ah wasiir ku xigeenka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa isna uga digayay saxafiyiinta inay ku deg degaan goobaha ay ka socdaan weerarada Al-shabab.
"Waan ogahay in wariyeyaashu ay jecelyihiin inay tabiyaan sheekada, waxaanna u maleynayaa inay dhamaantood ogyihiin in aaney jirin sheeko u dhiganta noloshooda, Fadlan, ha isku dayina
Wasiirku waxa uu ku eedeeyay Madaxda hey’adaha warbaahinta Dibadda iyo kuwa gudaha inaysan xil iska saarin daryeelka wariyeyaasha u shaqeeya.
“Dhamaan sawirada iyo muuqaaada fiidiyow ee Soomaaliya ee ka soo muuqda telefishinada caalamiga ah iyo wakaaladaha waa kuwo ay qaadeen wariyeyaasha Soomaaliyeed ee u shaqeeya, hadana cid ka fekertaa badqabkooda ma jirto,” ayuu yiri wasiirka.